Kamshaa Maammiloo Fayyadamuun,kamshaa cita sajoo Geengowuaniif luxee ida'uu ni dandeessa.
Guutuu luxee bakka galmee ammee keessatti harkistu kaasa.Bakka luxee kaasuu barbaaddetti cuqaasi,hammamtaa barbaadetti harkisi. Geengoo kaasuuf jijjiiraa gaf qabi wayita harkistu.
Guutuu geengoo bakka galmee ammee keessatti harkistuu kaasa. Bakka geengoo kaasuu barbaaddee cuqaasi,hammamtaa barbaaddetti harkisi cita kaasuuf,jijjiirraa gaf qabi wayita harkistu.
Boca guutuu golboo luxee fi sararawwan sarxee lamaa galmee ammee keessaatiin hiikkaman kaasa. Citaa deloo kaasuuf,luxee hammamtaa barbaddeetti harkisi. Itti aansuun sararaa sarxee jalqabaa hiikuuf cuqasi. Qaree kee gara bakka sarara sarxee lammaffaa kaa'uu barbaaddeetti sochoositii cuqaasi luxee irratti cuqaasuu sin hin barbachiisu. Geengoo delookaasuuf jijjiirraa gafqabi wayita harkiistu.
Boca guutuu golboo geengoo fi sararawwan sarxee lama galmee ammee keessattiin Kaasa. Geengoo deloo kaasuuf geengoo hammamtaa barbaaddetti harkisi, ittaansuun sarara sarxee jalqabaa hiikuudhaaf cuqaasi. Geengoo irratti cuqaasuunsii hin barbachiisu citaa kaasuufi,barbachisu cita kaasuuf Jijjiirra gaqqabi wayita harkistuu deloo.
Boca gutuu golboo sarxee fi sarara walakkaa sarara labbaa galmee ammee keessattin hiikkame kaasa. Ciraa muraa kaasuuf, hammamtaa barbaaddetti cita harkisi,itti aansuudhaan qabxii ka'uumsaa sarara wala sararaabbaa hikuuf cuqaasi. Qabxii dhuma sarara walakkaa sararraabbaa bakka kaa'uu barbaaddetti qaree sochoosi cita irratti cuqaasuun sii hin barbaachisu. Muraa citaa kaasuuf,Jijjiirraa gaqqabi wayita harkistu.
Boca guutuu,golboo citaa fi sarara walakkaa sarara labbaa galmee ammee keessaatiin hikkame kaasa. Muraa geengoo kaasuuf geengoo hammamtaa barbaaddetti harkisi,ittaansuun sarara walakkaa sarara labbaa hiikuuf cuqaasi bakka dhuma sarara walakaa sarara labbaa kaa'uu barbaaddetti qareekee sochosiitii cuqaasi. Geengoo irratti cuqaasuun si hin barbaachisu. Cita mura kaasuuf, jijjirraa gaqqabi wayita harkistu.
Cita, Hin guutamne
Luxee duwwaa galmee ammee keessatti gara mitti leessatti kan harkistu kaasa Luxee gara kaasuu barbaaddetti cuqasuun hammamtaa barbaaddetti harkisi. Geengoo kaasuuf, jijjiirraa gaq qabii harkisi.
Geengoo, Hin guutamne
Geengoo duwwaa galmee ammee keessatti eessatti akka harkistu kaasa. Geengoo bakka kaasuu barbaaddetti cuqaasuun,hamma mtaa barbaaddetti harkisi. Cita kaasuuf,Jijjiirraa gaq qabi wayita harkistu.
Cita Deloo, Hin guutamne
Boca duwwaa galmee ammee keessaatti golboo luxee fi sarara raadiyeesii lamaan hiikkaman kaasa cita deloo kaasuuf,luxee hammamtaa barbaaddetti harkisuudhaan sarara jalqaba raadiyeesii cuqaasi. Sarara lammaffaa raadiyeesii bakka kaa'uu barbaaddetti qareekee sochoosii cuqaasi. Luxee irratti cuqaasuu sii hin barbaachisu geengoo deloo kaasuuf, jijjiirraa gaqqabi wayita harkistu.
Cita Muraa, Hin guutamne
Boca duwwaa galmee ammee keessatti golboo tuxee fi sarara raadiyesii lamatiin hiikkame kaasa. Cita muraa kaasuuf,Cita hammamtaa barbaaddetti harkisi,ittaansuun sarara ka'uumsa sarara raadiyesii tokkoffaa hiikuuf cuqaasi. Sarara dhumaa sarara raadiyesii bakka kaa'uu barbaaddetti qaree keesochoo cuqaasi. Cita irratti cuqaasuun sii hin barbaachisu. Mura citaa kaasuuf jijjiirraa gaq qabi wayita harkistu.
Boca duwwaa galmee ammee keessatti golboo tuxee fi sarara diyaametirii tiin hiikkame kaasa. Cita muraa kaasuuf, cita hammamtaa barbaaddetti harkisi, ittaansuun sarara ka'uumsa diyaametirii hiikuuf cuqaasi. Sarara dhuma diyaameetirii bakka kaa'uu barbaaddetti qaree keesochoo cuqaasi. Cita irratti cuqaasuun si'i hin barbaachisu. Mura citaa kaasuuf jijjiirraa gaq qabi wayita harkistu.
Geengoo Mura, Hin guutamne
Golboo galmee ammee keessatti kaasa. Golboo kaasuuf, luxee hammamtaa barbaaddetti harkisi, ittaansuun ka'uumsa golboo hiikuuf cuqaasi. Bakka dhuma kaa'uu barbaadetti qaree kee sochoosii cuqaasi. Golboo geengoo irratti hundaa'e kaasuuf, jijjiirraa qabi wayita harkistu.
Geengoo Golbooammee keessatti geengoo irratti bu'uureftate keessa. Golboo kaasuuf,geengoo hammamtaa barbaaddetti harkisii ittaansuun. Ka'uumsa golboo hiikuuf cuqaasi. Qabiixi xumuraa bakka kaa'uu barbaaddetti qaree kee sochoosuun cuqaasi geengoo cuqaasuun sirraa hin jiru. Golboo cita irratti bu'uureffate kaasuuf, jijjiirraa gaqqabi wayita harkistu.
Title is: Luulloo